Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii 1aad ee Unugyada (Jaaliyadaha) JWXO iyo Go’aamadii Ka Soo Baxay
Posted by ONA Admin	/ August 27, 2014
Maadama la’isu diyaarinayo Shirweynihii Jaaliyadaha oo sanadkan ay martigalisay Jaaliyadda UK, waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa kulankii 1aad ee Unugyada JWXO ay isgu yimaadaan iyo Unugii martigaliyay. Waqtigaasi ma jirin jaaliyado, waxaa dhisnaa unugyo. Sidoo kale ma jirin hogaano iyo golayaal toona, unugyada ayaana matalayay oo go’aanka ururka lahaa.
Waxaad halkan ka akhrisan doontaan wacyiga siyaasiga ah ee ururka JWXO siduu u sareeyay waqtigaa oon ogsoonahay in xisbiyadii ka jiray Somaliya ay ku mashquulsanaayeen burbuinta dawladii Somaliyeed iyo Qaranimadoodii iyagoo la kaashanaya Mingistu Xayle Maryam. Wuxuu u dhignaa go’aamadii ka soo baxay sidan;
GO’AAMADII KULANKII UNUGYADA DIBADDA EE JWXO
Waxaa 6/5/1989 ka furmay Dimishiq Kulankii Unugyada JWXO ee dibadda, kaas oo socday saddex cisho, waxaa ka soo baxay go’aamada soo socda;
Qodobka 1aad : Isbadalka Magaca JWXO iyo Saamaynta uu ku leeyahay Halganka;
Ka dib markii la’is tusay inay jiraan sababo mawduuci ah iyo kuwo siyaasadeed, iyo awood jabhadda ooysan isku taagin lugaheeda gudaha iyo dibadaba, waxaa la go’aansaday in dib loo dhigo ku dhaqanka magaca ilaa dhamaadka sanadkan. “Eeg warqada lifaaqsan.”
Qodobka 2aad : Qiimaynta Xaaladda Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Somaliyeed;
Waxaa si qota dheer loo qiimeeyay xaalada guud ee JDS waxaana la go’aamiyay sidan soo socota;
B) Taliska JDS; In laga dhimo dacaayada gaarahaan xagga warfaafinta “KAAH” taasoon macnaheedu ahayn in laga aamuso gafafka uu ka galayo qadiyada Ogaden iyo mawqifkiisa ku aadan qadiyada. Iyadoo la horumarinayo in lagula dhaqmo taliska JDS wanaag, waa inuu dhinaca kale jiraa isticmaalnaana cadaadis kasta (daqdi) siyaasi ah la hanaana gacanta sare.
T) Dagaalka Sokeeye ee JDS; Dagaalka Sokeeye ee ka taagan JDS dan uuma aha shacbiga Somaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qadiyada Ogaden. Inagoo ka duulayna danaha joogtada ah ee aynu leenahay waa in aynu kaashan karno koox kasta. Isamarkaas inagoo tixgalinayna istraatiijiyada aynu ka leenahay gobolka waa in la soo dhaweeyo lana kasbado dadweynaha daggan waqooyi, marka xigana mucaaradada.
Waxaa la xadiday cida sida rasmiga ah u go’aamin karta kullamada rasmiga ah, waqtiga iyo goobta, ee la layeelanayo (SNM), kaas oo ah Iskuduwaha Ar.dibada ee JWXO.
J) Heshiiskii JDS iyo Itobiya; mawqifka aynu ka leenahay hseshiiskaas waa mid cad, kaas oo ah in aynu ka hirtagno, lana fashiliyo inaga oo isticmaalayna wada kasta , gaar ahaan inagoo xoojinayna halgankeena hubaysan.
Qodobka 3aad : Qiimaynta Xaalada cadawga;
B) waa in aynu kaashano xoogaga xornimo u dirirka ah ee la dagaalamaya gumaysiga Itobiya, inagoo sigaara u soo dhaweynayna , kaashanaynana xooga Oromada si aynu uuga faa’idaysano xogaas. Dhinaca kale waxaa la go’amiyay in aynu dib u dhigno khilaafka xuduudeed taasoy iyaguna aaminsanyihiin.
T) Xukun Hoosaadka : si loo fashiliyo shirqoolka cadawga ee XukunHoosaadka waa in aynu isticmaalno jid kasta. Waa in la kasbo loogana dhigaa qadiyada saaxiibo ashkhaasta u dhalatay Ogaden eek u jirta maamulka xukun hoosaadka.
Qdobka 4aad : Xidhiidhka Arrimaha Dibada;
Aydoon si qotadheer loo falanqayn qodobkan waqtiga oo yaraa awgeed, hadana waxaa la dajiyay qorshahan gaaban :-
B) In uu socdaal deg deg ah ku aado iskuduwaha arrimaha dibada wadamadaKuwait, Qadar, iyo Kanada.
T) In aynu ku sugno jiritaankeena wadanka Sudaan oo ahmiyad wayn u leh qadiyada ayadoo la xoojinayo xidhiidhada aynu la leenahay axsaabaha kala duwan ee Suudaan.
Qodoka 5aad : Arrimaha Warfaafinta;
Sida qodobka hore, kanna loogama doodin si qoto dheer waxaana si gaara looga hadlay Wargayska “KAAH’. Waxaana la go’amiyay in la kordhiyo tayada wargayska, si jiigto ahna loogu qaybgalo diyaarinta maqaalada iyo dhaqaalihiisaba. Sidoo kale waa in la soo noleeyo qaybta Ingriiska ee KAAH si joogto ahna loo gaadhsiiyo qaybta Somaaliga gudaha (Ogadeeniya iyo Samalia)>
KULANKII UNUGYADA DUBADA EE JWXO
DIMISHIQ 6 – 9 Abril 1989.